आँखाको नानी खैरो हुने ब्यक्ति प्रभावशाली, अरु के हुने मानिस कस्तो ? - IAUA
आँखाको नानी खैरो हुने ब्यक्ति प्रभावशाली, अरु के हुने मानिस कस्तो ?
ramkrishna October 15, 2017	astrologyअरु के हुने मानिस कस्तो ?आँखाको नानी खैरो हुने ब्यक्ति प्रभावशाली
एजेन्सी । शरीरका अंगबारे अध्यन गर्ने समुन्द्र शास्त्र ज्योतिष विज्ञानको एक हांगो हो । यसले हाम्रो शरीरका विभिन्न भागका बनौट र त्यसको अर्थबारे जानकारी दिन्छ ।
हाम्रा शरीरका अंग माध्ये आँखाको पनि समुन्द्र शास्त्रमा ठूलो महत्व छ । हाम्रो आँखाको रंग अनुसार स्वभाव पनि हुने यो शास्त्रको भनाइ छ । आँखा हेरेर नै मानिसको गोप्य कुरा थाहा पाउन सकिने समुन्द्र शास्त्रीहरु दावी गर्छन् ।
आँखाको नानी खैरो हुने ब्यक्ति प्रभावशाली हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिले अरुलाई सहजै प्रभावित गर्न सक्छन् । त्यतिमात्र होइन यस्ता ब्यक्तिले अरुबाट अनावश्यक फाइदा लिने खतरा पनि हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति धोकेवाज पनि सावित हुन्छन् ।
कुनै पनि ब्यक्तिको १० भन्दा बढी औंला छन् भने त्यस्ता ब्यक्तिले जीवनमा निक्कै धन कमाउँछन् । यस्ता ब्यक्ति प्रसिद्ध हुने पनि सम्भावना बढी हुन्छ ।
दाँत माथि दाँत
जुन ब्यक्तिको दाँत माथि दाँत खप्टिएको हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति विचारशील र साहसी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिले आफ्नो स्वभावबाट अरुलाई प्रभावित गर्न सक्छन् ।
रौं नै रौं हुने
कुनै पनि मानिसको शरीरमा जताततै रौं छ भने त्यस्तो ब्याक्तिको काम बासना उच्च हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिले भोग विलाशमा बढी ध्यान दिन्छन् ।
जुन ब्यक्तिको छातीमा अत्याधिक रौं हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति सन्तोषी स्वभावका हुनेछन् । यस्ता ब्यक्तिलाई धनको कमि हुँदैन ।
Previous Previous post: कस्तो हुनेछ तपाईको वैवाहिक जीवन ? हातको औंलाले खोल्छ यस्तो राज
Next Next post: नेपालीहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा–अधिक चिसो पानी पिउँदा यस्ता समस्या देखिने गर्छन्